टिकटकमा झन्डै १० लाख फलोअर्स भएका मायालु जोडीको यसरी भयो दुःखद वियोगान्त ! – Sandesh Press
November 19, 2021 125
झन्डै १० लाख फलोअर्स भएका अमेरिकी टिकटक स्टार अली अबुलबन अहिले जेलमा छन्। डेली मेलका अनुसार सान डिएगो निवासी २९ वर्षीय अलीलाई आफ्नै २८ वर्षीया पत्नी अन्ना अबुलबन र उनका साथी २९ वर्षका रेबर्न क्याडेनास ब्यारोन ह’त्या ग’रे’को आरोपमा पक्राउ परेका छन्।
अली र एना अबुलबन टिकटकका लोकप्रिय जोडी थिए। टिकटकमा उनीहरू नाचेको, हाँसेको देख्दा अन्य जोडीलाई ईष्र्या लाग्थ्यो। टिकटकमा उनीहरूको रोमान्टिक प्रस्तुति देख्दा उनीहरूबीच त्यस्तो कुनै अविश्वास होला भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्नथ्यो।
बेलाबेला साथमा ५ वर्षीया छोरीलाई समेत टिकटकमा प्रस्तुत गर्दा झन् कति खुसी र सुखी परिवार भनेर अनुमान गरिन्थ्यो। धेरैले कति मिलेको जोडी भनेर प्रशंसा पनि गरेका थिए। तर यो सुखद सिलसिला गत अक्टोबर २१ सम्म मात्र चल्यो।
तर जब एकाएक उनकी पत्नी एना मृत फेला परिन्, तब घटनाले अर्कै मोड लियो। घटना विवरणअनुसार उनलाई आफ्नी पत्नीप्रति शंका थियो– अर्कै पुरुषसँग प्रेम गरेको भन्ने। त्यसपछि उनले आफ्नी छोरीको आइप्याडमा गोप्य रूपमा सुन्न मिल्ने एउटा डिभाइस जोडे।
यसका माध्यमबाट उनले आफ्नी पत्नीलाई अर्का पुरुषसँग कुरा गरिरहेको फेला पारे। त्यसपछि उनले दुवैलाई गो’ली हा’ने’र मा’रे। यसपछि स्कुलमा रहेकी आफ्नी छोरीलाई लिएर उनी बेपत्ता भएका थिए। तर पछि उनी समातिए।झन्डै १० लाख फलोअर्स भएका अमेरिकी टिकटक स्टार अली अबुलबन अहिले जेलमा छन्। डेली मेलका अनुसार सान डिएगो निवासी २९ वर्षीय अलीलाई आफ्नै २८ वर्षीया पत्नी अन्ना अबुलबन र उनका साथी २९ वर्षका रेबर्न क्याडेनास ब्यारोन ह’त्या ग’रे’को आरोपमा पक्राउ परेका छन्।
यसका माध्यमबाट उनले आफ्नी पत्नीलाई अर्का पुरुषसँग कुरा गरिरहेको फेला पारे। त्यसपछि उनले दुवैलाई गो’ली हा’ने’र मा’रे। यसपछि स्कुलमा रहेकी आफ्नी छोरीलाई लिएर उनी बेपत्ता भएका थिए। तर पछि उनी समातिए।
Prevजब विमानस्थलमा रक्सी फाल्न भनेपछि यात्रुलाई यसरी पिलाइयो भोड्का
Nextप्रचण्डले के भने त्यस्तो ? अमेरिकाले दियो चेतावनी
सूर्यको राशि परिवर्तन, यी तीन राशिलाई धेरै शुभ !
कोभिडका बिरामीले भरिन थाले अस्पताल, तेस्रो लहरको संक्रमण शुरु